Xafladdii Qalinjabinta 16aad ee Jaamacadda Bariga Afrika oo maanta ka qabsoontay xarunta jaamacadda ee Bosaso – East Africa University
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa ka dhacdey Hool-ka Dr. Cabdiqadir Maxamed Cabdalle ee Jaamacadda Bariga Afrika; xarunteeda Bosaso.Xafaladaan oo ay ku qalin jebinayeen in ka badan 400 ardey.
Ardeyda qalin jebisey ayaa ka qalin jebiyey Sideed Kulliyadood oo kala ah; Injineerinka(Engineering), Caafimaadka(Medicine), Waxbarashada(Education), Dhaqaalaha (Economics), Culuumta Computer-ka(Computer Science), Caafimaadka Guud (Public Health), Maamulka Ganacsiga(Business Administration), Shareecada( Sharia and Islamic Studies),
Xafladaan oo ay ka soo qeybgaleen Wafti ka socdey Dowladda Puntland, Wafdigaan oo uu hogaaminayey Wasiirka kalluumaysiga Puntland ayaa waxaa ka mid ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ,maamulka Gobalka Bari , Kan dagamada Bosaso ayaaa magaalada Boosaaso ee xarunta Gobalka Bari uga qaybgalay xaflad ay ku qalanjabinaayeen　400-arday oo kabaxay Jaamacada Bariga Africa Xarunteeda Magaalada Boosaso.
Munaasabada xafladda ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalay Maamulka Jaamacada Bariga Africa,Aqaanyahano, Isimo,Culumo,ardayada wax kabarata Jaamacada iyo Qayabaha kaladuwan ee Bulshada Boosaaso.
Gudoomiyaha Jaamacada Bariga Africa Dr. Aadan Shiikhdoon cali oo furitaankii Xaflada ka hadlay ayaa sheegay in sanadkaan uu Jaamacada Bariga Afrika u ahaa Sanad guul lagana qalin jabiyay dhaamaan furuucda Jaamacada ee Gobalada Somalia, sidoo kale guddoomiyuhu wuxuu sheegay in tirada guud ee qalinjabiyayaashu ay ka badan tahay 800 oo arday.
Intaas kaddib waxaa goobta ka hadlay madax kala duwan oo cabiray dareenkooda farxadeed ee ku aaddan xafladda qalinjabinta, iyagoo sheegay in ay kaga qeybqaadan doonaan kaalintooda shaqaalaysiinta iyo garab istaagidda ardaydaan.
Ugu dambeyn waxaa maamulka jaamacaddu guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha gashay shahaadooyin, sidoo kale wuxuu abaal mariyey maamulka jaamacaddu qaar kamid ah haldoorka bulshada ee ummada wax taray.